Sida loo diro feyl inta aad wax ku qoreyso Telegram | Androidsis
Sida loo diro feyl adiga oo wax ku qoraya Telegram
Telegram, sida WhatsApp, marka aad farriin u dirto mid ka mid ah dadka aad la xiriirto, waxay xaddideysaa qaar ka mid ah shaqooyinka, oo ay kujirto inaadan awoodin inaad dirto feyl. Uguyaraan tani waa waxa arjigu muujiyo jaleecada hore, laakiin kani maahan kiiska, mahadi ha ka gaartee xulashooyinka qalabka waa suurtogal in sidaas la sameeyo.
Mar alla markii aad qorto qoraal yar, galka iyo qoraalada codka ayaa ka baaba'aya xulashooyinka, laakiin khiyaanadu way fududahay haddii aad rabto inaad ku dhejiso sawir, fiidiyo ama feyl. Isla sidaas oo kale kuma dhacdo WhatsApp, taas oo ka dhigaysa doorashadan mid firfircoon sababo la xiriira cusbooneysiinta dalabyada ugu dambeeyay
Haddii aad rabto inaad dirto feyl, ha noqoto sawir, muuqaal ama dukumenti, ujeedku waa in la qoro qoraalka oo lagu lifaaqo, adoo u sheegaya inaad wax muhiim ah u dirayso. Haddii ay tahay shay muhiim ah, muuji sidaas darteed si ay u feejignaato oo aan loo dareemin inay tahay farriin kale oo dheeri ah, maadaama mararka qaarkood aan ogaanno farriimaha qaarkood.
Si aad u fuliso hawshan waa inaad ku dhaqaaqdaa tallaabooyinka soo socda, xusuusnow inaad raacdo wax walba sidaan u sharraxnay:
Wadahadal aad la leedahay mid ka mid ah dadka aad la xiriirto qor qoraalka oo hadda dhagsii dhinaca midigta sare saddexda qodob ee taagan
Hadda waxay ku tusi doontaa dhowr astaamood: Gallery, Fayl, Goob, Xiriir iyo Muusig, dooro midka ugu habboon faylka aad diraysid oo guji astaanta dirista
Qofku wuxuu heli doonaa farriinta oo ay la socoto feylka, u sheeg waxa muhiimka ah si loo xuso
Waxaa jira waxyaabo badan oo arjiga Telegram ka dhigaya midka ugu fiican waqtiga loo isticmaalay fariinta ugu dhakhsaha badan isla markaana aan ahayn ta labaad. Amniga ayaa ka mid ah waxyaabaha soo kordhayay tan iyo markii la bilaabay, xitaa ka hor WhatsApp.
telegraam wuxuu noo ogolaanayaa inaan faylashayada ku keydinno daruurtasidoo kale ayaa raadinta horumarsan waana awoodaa abaabulo dhammaan sheekooyinka ku jira faylalka. Ogaanshaha gudaha iyo dibeddaba waxay noqon doontaa aalad aad adeegsi badan u gelisay aragtida kartida taas oo lagaga saari karo dhawr talaabo oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo diro feyl adiga oo wax ku qoraya Telegram
Soo dejiso sawirrada sawirada, dhawaaqyada iyo dhaqdhaqaaqa bilawga ah ee OnePlus 2077T Cyberpunk 8
Sidee loo ogaadaa waxa ay tiri fariin WhatsApp ah oo la tirtiray